China Crubbers Manufacturing and Factory | Jrain
Ny baoboba Fiberglass dia be mpitia amin'ny fitahirizana rano, ny fikarakarana rano, ny rafitra FGD, ny fanodinana simika ary ny fanaraha-maso ny fandotoana, ny fanadiovana entona, ny fifehezana ny fandefasana gazy, indrindra ny entona fandotoana, ny fako sy ny fitrandrahana herinaratra. satria:
Raha oharina amin'ny vokatra vita amin'ny vy na vita amin'ny vy, ny plastika fanamafisana Fiberglass (FRP) dia manana tombony maro.
Ny FRP dia maivana mahery, matanjaka ary azo alain-tahaka amin'ny diametaly midadasika, izay misy fiantraikany mivantana amin'ny resaka fanitarana ny fiaingan'ny fametrahana sy ny fitahirizana ny vidiny.
Ho fanampin'izany, ny FRP dia fitaovana maharitra maharitra raha oharina amin'ny fitaovana nentim-paharazana, izay midika fa ny FRP dia manome tombony lehibe amin'ny resaka fanoherana ny abrasion, corrosion simika, harafesina, ary koa amin'ny haavo farany ambany sy avo be. Izany dia mahatonga azy io ho vahaolana maharitra maharitra miaraka amin'ny vidin'ny fikolokoloana ambany ho an'ny mpanjifa.
Ny anatiny ao anaty vatan'ny fibra-fibre dia malama, manome toetra tsara ary mora madio.
Ny singa fananganana rafitra misy ny fantsona anatiny sy ivelany, ny banky famoahana, ny vatan'ny fanohanana, ny sivana, ny fonosana, ny rafitra fitsinjarana ary ny famafazana dia azo atao amboarina na amin'ny endriny rehetra.
Ny kojakojan'ny ivelany toa ny tohatra, lampihazo, lalamby, lalan-drano, fitsobohana, famotanana elektrostika ihany koa ny satan'ny famatsiana Jrain.
Ny Jrain dia manadihady isaky ny tetik'asa vaovao ary mamerina ny fanitsiana ny fomba fiasa mba hisafidianana ireo fitaovana mety sy ny fomba fanamboarana, ary farany dia mamolavola sy mamolavola ireo mpandrafitra fibre mifototra amin'ny fangatahana momba ny haingam-pandeha, mari-pana, ny tahan'ny fidirana, ny tsindry, horohoron-tany, ny rivotra sy ny toetrandro .
Rehefa ilaina dia ampiasaina ny fibre fitaratra ECR ho fanampin'ny fibre E-vera mba hamoronana fanoherana simika avo kokoa, ary ny akanjo miloko na semi-mangarahara no ampiasaina hanoherana ny hazavana UV ary manome fiarovana.
Amin'ny maha mpamatsy serivisy feno azy dia mamolavola sy mametraka fitaovana ho an'ny ivelany ny mpanondrana ohatra ny tohatra, lampihazo, rano fantson-drano, fantsom-panafahana ary famafazana elektrostika fa manana fitaovana hanompoana anao amin'ny alàlan'ny famoahana ireo internaly rehetra toy ny banky famonosana, fanohanana vakana, filam-bolo ary fonosana.
Previous: Mpiara-monina & Mpanjifa
Manaraka: Tobaka saha lehibe lehibe
Nohavaozina Fiberglass, Fitaovana fanodinam-bokatra Fiberglass, Masinina fanamafisana GRP, Mamatotra fanamafisana FRP, Famolavola grating, hamolavola,